Taariikhda My Butros » Sida loo ilaaliyo Xiriirka uu ku qanacsan yahay
Last updated: Sep. 18 2020 | 3 min akhri
Qaar badan oo lammaanaha u ogaan horeba: xiriirka uu ku qanacsan yahay waxay u baahan tahay waqti badan iyo maal-gashiga tamarta. Inkastoo qaar ka mid ah waxa ay barteen sida ugu adag, dadka kale la fahamsan yahay tan iyo bilowgii aad u mid aan waxba haysan karaa xiriirka uu ku qanacsan yahay isagoo aan la nabad-kabixinta la horreeya oo dhan. Haddii aad raadinayso ee aad xidhiidhka iyo aad dareento in aadan ku dhammaataan ku qanacsanayn sida ay hadda tahay, waa inaad ogaataa in dhibic ka wanaagsan ku soo bilaawdo dhanka hagaajinta naftaada waa. Koritaanka Self iyo horumarka shakhsiga ah waa furaha kaliya ma ahan in aad farxad u gaar ah, laakiin sidoo kale in ay nolol wanaagsan oo ku qanacsan yahay sida laba qof oo. Waxaad aan kooxdaas kartaa naftaada ama xiriirka kala ee labaad, laakiin halkan waxaa ka mid ah dhibcood si ay u eegaan:
1. Farxad ka timaada gudaha
Taasi lagu sheegay, waa inaad ogaataa in goolka lammaanahaaga kaliya ee nolosha ma aha si aad ugu faraxsanahay marka aad fadhid iyo waxba sameyn ku saabsan. Farxad la filayaa in ay si fudud u garaaca albaabka gurigaaga waa nacasyo halkii. Xiriirka A-side ku lug leeyihiin laba qof oo ixtiraam iyo daryeel ku saabsan midba midka kale. Lammaane kasta oo ay wax ka qaadataa xiriirka, laakiin sidoo kale wax ka soo Bixiyaa wax u galay. Iyadoo jacaylka noqon karaan kuwo indho iyo shuruud la'aan, haddana ma laha in ay tooda ku. Sidaa darteed, ma filan kale si aad ugu faraxsanahay. Xafiiska Invest in aad naftaada; bartaan sida aad u faraxsan si ku dhiirrigeliney in ay farxad aad lamaane ee.
2. Dogobka ishaada ku jiree ka saar
Hadalkanu oday ah wuxuu na barayaa in horta dogobka ishaada ku out of our, hadii aan dooneyno inay awoodi karaan inay si cad oo dib keliya arki saxarka isha qof kale. Taas macnaheedu waa maxay? Marka hore raadi naftaada ugu muraayada, ogaado oo isku day in ay ka shaqeeyaan ayna duleella ka hor isagoo farta ku fiiqaya misshapes lammaanahaaga. Aan ka dhicin ee kale ee aad u daran oo ka socda xukunkan is, jari lamaanahaaga debcin qaar ka mid ah, joojin daawashada isaga / iyada dhaqaaqo hal kasta iyada oo weyneyso ah, iyo isku day inaad fahanto falalka ay halkii iyaga xukuntid. Marka xiga ee aad leedahay isku dhac laba yar, halkii ay isku dayayaan in ay saaray eedda on qof kale, isweydii waxa aad daalimiin. Isku day si aad u ogaato siyaabaha ee isku dhac diidku, iyo, markii khilaaf soo baxdo, fekero xal in ay si nabad ah u xaliyaan.
3. Dhig deji
Sidaas xidhiidhka badan qaadan jeedo a qaldan labada wada-hawlgalayaasha oo kaliya sababtoo ah Wiile, dabeecad dagaalyahan ah ee. Xiriirka A-side ma aha dagaalka ah. Uma baahnid in aad si ay u weeraraan wehelkaaga ama loo tiriyo guul aad sidii dhibco sare aan kaa caawin doona inaad dareento farxad. Halkii, isku day in aad is dejiso oo si samir leh lammaanahaaga. Ka feker in aad lamaanahaaga ma aha Cadawgiinna, oo mar kasta oo aad rabto in aad kor u codkaaga, neef u qaado oo isu celinaysaa. Sug ilaa aad ka awoodo in arrinta kala hadal aamusnaan, oo aad dhawaan arki doonaan natiijada.
4. Dhidibbada caafimaad qaba in aad xiriir
Sida guri adag oo waxaa lagu dhisay on aasaaska adag, xiriirka uu ku qanacsan yahay ayaa lagu dhisay kuwa caafimaad qaba. Tani waxay ka dhigan tahay in aad daacad ah aad nolosha la wadaagto iyo, ugu muhiimsan, naftaada in tan iyo bilowgii aad u. Waa maxay sababta aad u geli lahaa inuu dheer si loo qariyo ayna duleella haddii aad wada jir qorshaha mustaqbalka ah? The kale ugu danbeyn u dareemi doonto dhibcood taagta daran aad. Weligaa ma u maleeyeen in lamaanahaaga laga yaabaa in dhab ahaantii jeclahay kooxda in aad ka mid ah in aad ka fiirsan oo xumaaday?
5. Ha quusan riyooyinkiinna aad
Yaa kuu sheegay in si ay u leedahay xiriirka uu ku qanacsan yahay oo ku faraxsan aad qabto in la siiyo ilaa riyooyinkiinna aad? Haddii aad u malaynayso in this waa rabitaanka lammaanahaaga, waxaa jira labo ikhtiyaar: midkood aad isaga helay / iyada qaldan, ama ma ahan mid ka mid ah. Anaanimada Midkoodna, mana aqan noqoneyso habdhaqanka saxda ah ee xiriirka niyadsami. Runtaa, iskaashi jacaylka caafimaad leh waxay ka dhigan tahay in guud ahaan taageerada laba iyo mid kasta midka kale ku dhiirigaliyaa inay ku baaqaan in riyadooda. Haddii aad go'aansato in rabitaanka iyo gool kuwiisiina ma ay muhiim yihiin, aad ugu dhakhsaha badan dareemi doontaa jahawareer iyo fulin waayay. Ma tani meesha aad rabto in aad xiriir si aad u sii jeeda?
4 Tallaabooyinka lagu soo dir First kaamilka Fariinta Naag a
Shan Life baranay cashar Cats iyo Xiriirka
Sida loo Cope Ka dib markii a Break Up
Leslie ayaa Top Ten Dos ituso Summer Doggie Adaabta